Rosia: Mitady fialokalofana any Géorgie ilay [zazavao] voantso ho miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2021 5:22 GMT
(Lahatsoratra nivoaka ny volana Janoary 2009)
Nangataka fialokalofana any amin'ny Repoblikan'i Géorgie mba handosirana ireo “fepetra tsy zaka” ao amin'ny tafika Rosiana i Aleksandr Glukhov, tanora Rosiana 21 taona voantso ho miaramila. Tao amin'ny toerana fisakafoana McDonald's any Tbilisi no iray tamin'ireo fisehoan'i Glukhov tamin'ny fampitam-baovao. Nambaran'ny tompon'andraikitra Rosiana fa nosamborin'ny tafika Zeorziana tany Ossetia atsimo i Glukhov, toerana izay tsy maintsy nanatanterahany ny raharaha miaramilany, ary nentina tany an-drenivohitra Zeorziana izy. Vitsy ny olona any Russia no toa mihevitra an'i Glukhov ho “mpamadika”. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny tontolon'ny bilaogy mpiteny rosiana.
Mpisera LJ shurigin:
[Miezaka mamantatra ny fomba mety nitrangan'izany rehetra izany] ankehitriny ny minisiteran'ny fiarovam-pirenena […] . Hanombohana azy, hita fa zazavao io miaramila io. Ahoana no nahatongavany tany Ossetia atsimo, na teo aza ny baiko azon'ny vondro-tafika miaramila amin'ny miaramila manana fifanekena asa – tsy misy mahavaly araka ny tokony ho izy an'io fanontaniana io.
Mpisera LJ introvertoff:
Tratra alina an-dalana nody aho omaly. Tao anaty [bisy], ankoatra ahy, ny mpamily, lehilahy roa sy vehivavy roa, eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 60 taona eo. Nandefa ny vaovao ny onjam-peo:
“Ary farany, tafakatra dingana famaranana ilay Eveka Kirill tamin'ny lalao “safidio ilay patriarka”, toy izany ny filazan'ny onjam-peo, tamin'ny fomba ofisialy kokoa. […] Nihoraky ny hafaliana ny tao anaty bisy – nanomboka nifanakalo hevitra tamim-pifaliana ny vehivavy sy ny lehilahy momba ny ahiahiny, ny fanantenan'izy ireo ary ny fomba nivavahany. Faly izy ireo fa hiova amin'ny làlana tsara ny Eglizy, sns.
Ary tampoka teo ! Nanomboka niresaka momba ny vaovaon'ilay Sergent Glukhov mpitsoaka an-daharana izy ireo tamin'ny onjam-peo. Ary niova hiaka feno hatezerana ilay feo nahafaly teo- “Ahoana no nahavitany izany !”, “Mpitsoaka an-daharana maloto!”, “Natakalony sakafo tsy manjary ny tanindrazany!”, “Anefa nanao fianianana izy!”, “Homboy izy, ilay alika, homboy izy! ” Ny Kristiana orthodoksa, izay [latsa-dranomasom-pifaliana] iray minitra lasa izay dia nivadika ho lian-drà nitaky sazy ho an'ilay mpamadika! […]
Mpisera LJ drugoi:
[…] Tsy mpamadika izy, mazava ho azy. Adala fotsiny, tsy matotra, mbola kely. Tsy an'ny tafika izy fa tokony mbola milalao fasika anaty boatinà fasika.
Mpisera LJ mike67:
Angamba mendrika fanamelohana i Glukhov, kanefa ahoana no hanaovana izany raha matin'ny fihomehezana ? […]
Rehefa hita fa mitsoaka ny fahavalo ny miaramila satria tsy misy fandroana ao amin'ny vondron-tafika nisy azy ary nanozona ny komandà rehefa tsy notanterahina ny baikony… Tsy misy mino izany. Mitady politika ry zareo, tsindry mampiahiahy avy amin'ny ankolafy Zeorziana. Tsindry inona? Mifohaza: ireo ihany no olona izay mandika ny fangatahana azy ireo hamoaka ny fakony ho fanitsakitsahana ny maha-olona azy. Izany no taranaka malalaka, […], ary inoana fa mahafantatra kokoa izy ireo noho isika momba ny voninahitra sy ny haja.
Tsy misy olona mahazo izany: tsy politika izany, fa tarana-jaza, miha lehibe […] amin'ny fotoana ahafahana mindram-bola mba hividianana efijery plasma na fiara mihitsy aza rehefa vita ny fianarana. […] Miparitaka erak'izao tontolo izao toy ny virosy ny fiheverana fa mendrika ny tsara indrindra ny olona tsirairay […] .
Fanamarihana momba ny toe-javatra iainana ao amin'ny tafika Rosiana, avy amin'ny mpisera LJ shabolovka38 , ho fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsoratry ny mpisera LJ grazy-gunner:
[…] Ary nisy vehivavy iray nilaza hoe: Eny, ratsy ny toe-javatra iainana. Monina an-day izy ireo, hafanaina amin'ny fatana.
Fa aiza no tokony honenan'ireo miaramila? Any amin'ny trano tsara tarehy ?
Budimir, mpisera LJ :
Aleksandr Glukhov: «Tiako izany!».
Namoaka doka hafa kely […] ny McDonald's : Miaramila rosiana iray, tsy mahazaka ny zava-tsarotra iainana amin'ny asa fanompoana miaramila tany Ossetia Atsimo, izay tsy nanomezany azy sakafo ara-dalàna, nitsoaka an-daharana nankany amin'ny Zeorziana ary nahita fahasambarana tany […].
Mpisera LJ merjageko:
Manontany tena aho raha handefa tanky any Georgie i Rosia, hamonjy an'i Sergent Glukhov. Satria ampijalian'i McDonald izy any…
Nanontany ilay mpisera neznaika-nalune hoe:
Lazao amiko, moa ve ny McDonald any ivelany izay misy rindrina miepakepaka no marika vaovao amin'ny “fitiavana mandray vahiny Zeorziana malaza” sy ny “sakafo Zeorziana malaza?”
Namaly ny mpisera LJ taganay :
Ity karazana fitiavana mandray vahiny ity dia mendrika an'ity karazana mpitsoaka an-daharana ity.